‘फुर्सद भए अफिसमै पनि पढ्छु’ « Loktantrapost
‘फुर्सद भए अफिसमै पनि पढ्छु’
१ श्रावण २०७३, शनिबार १२:४६
सरकारी जागिरे भएर पनि थुप्रै स्रष्टाले लेखनकर्मलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइरहेका छन् । झापाकै सन्दर्भ जोड्दा कृष्ण धरावासी लगायतको नाम आउँदा छुटाउनै नहुने अर्को नाम हो–देवीचरण भण्डारी ‘सरोज’ । उनको ‘यौटा असल सन्तान जन्माउनुपर्छ’ कविता–सङ्ग्रह २०६१ सालमै प्रकाशित भएको थियो भने हालै समालोचना सङ्ग्रह बजारमा आइसकेको छ । स्रष्टाको घरघरै पुगेर भलाकुसारी गर्ने नयाँ परम्परा बसाउन थालेका उनीसँगको पुस्तक वार्ता प्रस्तुत छ–
महेशविक्रम शाहको छापामारको छोरो पढ्दैछु ।
सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित पुस्तकहरू । यस्ता कृतिहरूमा समाजको सिङ्गो तस्वीर देखिन्छ ।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, गोपाल प्रसाद रिमाल, गोकुल जोशी, मोदनाथ प्रश्रितहरू मन पर्छन् । यी बाहेक थुप्रै नेपाली लेखकहरू मन पर्छन् ।
साथीलाई दिन कुन पुस्तक सिफारिस गर्नु हुन्छ ?
यही पुस्तक पढ्नु भनेर पुस्तकको नाम किटानी गर्नु भन्दा पनि जुन पुस्तक पढेर केही ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्छ, केही शिक्षा लिन सकिन्छ, त्यसबाट समाजको लागि केही गर्ने प्रेरणा प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यस्ता पुस्तकहरू पढ्न अनुरोध गर्छु ।
पुस्तक खरिदमा कति खर्च हुन्छ ?
वर्षमा त्यस्तै ३÷४ हजार जति खर्च हुन्छ होला । पुस्तक खरिदको छुट्टै हिसाव राख्ने गरेको छैन ।
एउटा कुरा भने स्मरणयोग्य ठान्छु म । गएको वैशाख ३१ गते मेरो पछिल्लो कृति ‘सरोजको समीक्षा सौरभ’ समालोचना सङ्ग्रहको लोकार्पण कार्यक्रममा धरानबाट तिनजना डाक्टरहरू एकै ठाउँमा उपस्थित भएर मलाई आशिर्वचन प्रदान गर्नु भयो । उहाँहरू प्राडा भीम खतिवडा (प्रमुख अतिथि), प्राडा टङ्क न्यौपाने (विशेष अतिथि) र प्राडा गोपाल भण्डारी (विशेष अतिथि) हुनु हुन्थ्यो । यस क्षणलाई मैले अत्यन्तै महत्वपूर्ण र स्मरणयोग्य क्षणको रुपमा लिएको छु ।
खासै यही समय भन्ने छैन । फुर्सदको समयमा जुनसुकै बेला पनि पढ्ने गर्छु । फुर्सद भयो भने अफिसमै पनि पढ्ने प्रयास गर्छु ।
पुस्तक कसरी जतन गर्नु हुन्छ ?
दराज या र्याकमा राख्ने गर्छु ।
मोदनाथ प्रश्रितको ‘मानव’ महाकाव्य फेरि एकपटक पढ्न मन लागेको छ । पाठकका नाताले नयाँ पुराना सवै लेखकहरूका कृति पढ्ने इच्छा त जागि हाल्छ नि ।